नयाँ दैनिक | दाइले ८ अर्ब ऋण तिरीदिएर जेल जानबाट जोगाइदिएपछि मुकेशलाई के भने उनका भाइले ? दाइले ८ अर्ब ऋण तिरीदिएर जेल जानबाट जोगाइदिएपछि मुकेशलाई के भने उनका भाइले ? – नयाँ दैनिक
दाइले ८ अर्ब ऋण तिरीदिएर जेल जानबाट जोगाइदिएपछि मुकेशलाई के भने उनका भाइले ?
चैत ५, काठमाडौँ । भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीले भाइ अनिल अम्बानीको ७.७ करोड डलर ऋण तिरिदिएर जेल जानबाट जोगाए । अनिलले स्वीडेनको एरिक्सन कम्पनीलाई मंगलबारसम्म ८० मिलियन डलर तिर्नुपर्ने थियो । यो नेपाली ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो ।
तर अदालतको आदेशबाट बाबजुद उनले रकम तिर्न सकेका थिएनन् । नसकेको भए उनी अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा उनी जेल जाने थिए । यद्यपि दाजुभाइबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन । दुवै एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वीजस्ता बनेका थिए ।
दाइको सहयोगपछि अनिलले वक्तव्य जारी गर्दै दाइ मुकेश र भाउजू नीता अम्बानीलाई भनेका छन्, ‘कठिन घडीमा मैले परिवारको सहयोग पाएँ । यसले हाम्रो परिवारको बलियो मूल्य–मान्यतालाई दर्शाउँछ । जुन समय मलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता थियो, मेरो परिवार साथमा रह्यो ।’
अनिलले भनेका छन्, ‘म र मेरो परिवार यसका लागि आभारी छौं कि हामी अतीतबाट निस्कियौं । यो सहयोगका लागि हृदयदेखि आभार ।’